International Magweta ehutongi muNetherlands - Law & More
BUDAI NOKUDA ​​KWAZVO?
DZVARA MUMWE MUMWE MUTEMO WEMADZIMAI MUTEME
Mutemo wekutonga uri pamusoro pekodzero uye zvisungo zvevagari nemabhizinesi kuhurumende. Asi mutemo wezvekutonga unodzorawo maitirwo anoitwa nehurumende uye zvaunogona kuita kana ukasabvumirana nesarudzo yakadaro. Sarudzo dzehurumende dzakakosha mumutemo wekutonga. Iyi sarudzo inogona kuve nemhedzisiro inosvika kwauri. Ndosaka zvakakosha kuti iwe utore matanho nekukasira kana iwe usingawirirane nedanho rehurumende rine mimwe mhedzisiro kwauri. Semuenzaniso: mvumo yako ichatorerwa kana danho rekumanikidza richatorwa kwauri. Aya ndiwo mamiriro ezvinhu aunogona kuramba. Ehe saizvozvo pane mukana wekuti kupokana kwako kucharambwa. Iwe zvakare une kodzero yekuisa mutemo wekukwirira & nekuramba kwekuramba kwako. Izvi zvinogona kuitwa nekutumira ziviso yekukwirira. Magweta ehutongi e Law & More inogona kukurayira uye kukutsigira mukuita uku.
General Administrative Mutemo Mutemo
Iyo General Administrative Mutemo Mutemo (Awb) inowanzogadzira chimiro chemitemo mumatare mazhinji ekutonga. General Administrative Law Act (Awb) inoisa pasi sei iyo hurumende inofanira kugadzirira sarudzo, kuburitsa mutemo uye kuti zvipi zvirango zviripo zvekumanikidza.
Zvibvumirano Unogona kusangana nemutemo wekutungamira kana uchida mvumo. Izvi zvinogona kuve, semuenzaniso, mvumo yezvakatipoteredza kana doro uye nemvumo yekugamuchira vaeni. Mukuita, zvinowanzoitika kuti kunyorera kwemvumo kunorambwa zvisirizvo. Zvizvarwa zvinogona kuramba. Iyi sarudzo pamvumo zvisarudzo zviri pamutemo. Pakutora sarudzo, hurumende inosungirwa nemitemo inoenderana nezviri mukati uye nemabatiro anoitwa sarudzo. Kuchenjera kuve nerubatsiro rwemutemo kana iwe uchiramba kurambwa kwemvumo yako kunyorera. Nekuti iyi mirawo inogadzirwa pahwaro hwemitemo yepamutemo inoshanda mumutemo wekutonga. Nekuita gweta, unogona kuva nechokwadi chekuti maitiro anoenderera mberi nenzira yekupokana uye muchiitiko chekukwirira.
Mune zvimwe zviitiko hazvigoneke kuisa kupokana. Mukufambiswa zviri semuenzaniso zvinogoneka kuendesa pfungwa mushure mekunyorwa kwesarudzo. Pfungwa ndeyekuita iyo iwe, semunhu anofarira, yaunogona kutumira kune vane masimba kugona kupindura danho rakanyorwa. Chiremera chinogona kutora maonero akataurwa mukutarisa kana sarudzo yekupedzisira ichatorwa. Saka zvine hungwaru kutsvaga zano rezvemitemo usati waendesa zvaunofunga zvine chekuita nesarudzo. Subsidies Kupa masupidhi zvinoreva kuti unekodzero yekuwana zviwanikwa zvemari kubva kuboka rinotungamira nechinangwa chekubhadhara zvimwe zviitiko. Kupa kwerubatsiro nguva dzose kune hwaro hwepamutemo. Pamusoro pekuisa mitemo, mari dzekutsigira chishandiso chinoshandiswa nehurumende. Nenzira iyi, hurumende inokurudzira hunhu hunodiwa. Rubatsiro runowanzoiswa pasi pemamiriro. Aya mamiriro anogona kuongororwa nehurumende kuti aone kana ari kuzadzikiswa. Masangano mazhinji anoenderana nerubatsiro. Asi zvakadaro mukuita zvinowanzoitika kuti rubatsiro rwunobviswa nehurumende. Iwe unogona kufunga nezve mamiriro ari kutemerwa pasi nehurumende. Kudzivirirwa zviri pamutemo kunowanikwawo pakurwisa danho rekudzora. Nokuramba kubviswa kwerubatsiro, iwe unogona, mune dzimwe nguva, kuona kuti kodzero yako kurubatsiro inochengetedzwa. Iwe uri mune kukahadzika kana rubatsiro rwako rwakabviswa zviri pamutemo kana iwe uine mimwe mibvunzo nezvezvipo zvehurumende? Ipapo inzwa wakasununguka kubata magweta ehutongi e Law & More. Tichafara kukupa zano pamibvunzo yako maererano nerubatsiro rwehurumende.
Kutarisira kwekutarisira Unogona kutarisana nehurumende kana mitemo ikatyorwa munzvimbo yako uye hurumende ikakukumbira kuti upindire kana apo, semuenzaniso, hurumende inouya kuzotarisa kana iwe uchienderana nemvumo yemvumo kana zvimwe zvimiro zvakatemerwa. Izvi zvinonzi kutevedzwa kwehurumende. Hurumende inogona kuendesa manejimendi pachinangwa ichi. Vatariri vane mukana kune imwe neimwe kambani uye vanobvumidzwa kukumbira ruzivo rwese rwakakosha uye kuongorora pamwe nekutora manejimendi. Izvi hazvirevi kuti pane fungidziro yakakomba yekuti mitemo yakaputswa. Ukasabatira pamwe pakadai, unorangwa. Kana hurumende ikataura kuti pakave nekutyorwa, iwe unozopihwa mukana wekuti uite chero kune kwaunoda kuitiswa. Izvi zvinogona kuve, semuenzaniso, odha iri pasi pekubhadhariswa chirango, odha pasi pechirango chehutongi kana faindi yekutonga. Mvumo inogona zvakare kutorwa nekuda kwekumanikidza. Rairo pasi pechirango chekubhadhara chinoreva kuti hurumende inoda kukukurudzira kuti uite kana kurega kuita chimwe chiitiko, mune iyo kesi iwe uchave nechikwereti chemari kana ukasabatira pamwe. Iwo iwo marongero pasi pechirango chehutongi anoenda zvakatopfuura izvo. Nehurongwa hwehutongi, hurumende inopindira uye mutengo wekupindira unozotorwa kubva kwauri. Izvi zvinogona kuve zvakadaro, semuenzaniso, kana zvasvika pakuputsa chivakwa chisiri pamutemo, kuchenesa mhedzisiro yekutyorwa kwezvakatipoteredza kana kuvhara bhizinesi pasina mvumo. Zvakare, mune dzimwe nguva hurumende ingasarudza kubhadharisa faindi kuburikidza nemutemo wekutungamira panzvimbo pemutemo wematsotsi. Muenzaniso weiyi faindi yekutonga. Faindi yekutungamira inogona kuve yakakwira kwazvo. Kana iwe wakatemerwa faindi yehutongi uye ukasabvumirana nazvo, unogona kukwidza nyaya kumatare. Nekuda kweimwe mhosva, hurumende inogona kusarudza kubvisa mvumo yako. Iyi nhanho inogona kuiswa sechirango, asiwo sekumanikidza kudzivirira chimwe chiitiko kubva mukudzokororwa.
Mhosva yehurumende Dzimwe nguva sarudzo kana zviito zvehurumende zvinogona kukonzera kukuvara. Mune zvimwe zviitiko, hurumende ine mutoro wekukuvara uku uye iwe unogona kukumbira kukuvara. Pane nzira dzinoverengeka idzo iwe, semunhu muzvinabhizimusi kana wega, unokwanisa kukumbira kukuvara kubva kuhurumende. Kuita zvisiri pamutemo kwehurumende Kana iyo hurumende yaita zvisiri pamutemo, unogona kubatira hurumende kuti ive nemhosva yekukuvara kwawakaita. Mukuita, izvi zvinonzi zvisiri pamutemo hurumende chiito. Iyi ndiyo kesi, semuenzaniso, kana hurumende ikavhara kambani yako, uye mutongi anozofunga kuti izvi zvaisatenderwa kuitika. Sawe muzvinabhizimusi, unogona kutora kurasikirwa nemari kwawakatambura nekuda kwekuvharwa kwenguva pfupi nehurumende. Chiito chepamutemo chehurumende Mune zvimwe zviitiko, iwe unogona zvakare kutambura kukuvara kana hurumende yaita danho repamutemo. Izvi zvinogona kunge zviri izvo, semuenzaniso, kana hurumende ikaita shanduko kuhurongwa hwekukamurwa, izvo zvinoita kuti zvimwe zvirongwa zvekuvaka zviitike. Shanduko iyi inogona kukonzeresa kurasika kwemari kwauri kubva kubhizinesi rako kana kudzikiswa kwemutengo wemba yako. Mumamiriro ezvinhu akadaro, isu tinotaura nezve muripo wekukuvara kwehurongwa kana kurasikirwa muripo. Magweta edu ekutonga achafara kukupa zano nezve mikana yekuwana muripo nekuda kwekuita kwehurumende. Kuramba uye kukwidza Pamberi pekushora kupokana nesarudzo yehurumende kunogona kuendeswa kudare redzimhosva, nzira yekuramba ichatanga kuitiswa. Izvi zvinoreva kuti iwe unofanirwa kuratidza nekunyora mukati memavhiki matanhatu kuti haubvumirane nesarudzo uye zvikonzero nei usingabvumirane nazvo. Zvinopesana zvinofanirwa kuitwa zvakanyorwa. Kushandiswa kweemail kunogoneka chete kana hurumende yaratidza zvakajeka izvi. Kupokana parunhare hakutorwe sekushora zviri pamutemo. Mushure mekunge ziviso yekuramba yaendeswa, iwe unowanzo kupihwa mukana wekutsanangura kupokana kwako nemuromo. Kana iwe ukaratidzirwa kuti wakarurama uye chishoro chakanzi chakasimbiswa, chisarudzo chakakwikwidzwa chinodzoserwa uye imwe sarudzo ichaitsiva Kana ukasaratidzirwa kuti wakarurama, kuramba kwacho kuchanzi hakuna hwaro. Kukwidza kupokana nesarudzo yekuramba kunogona zvakare kuiswa kudare. Kukwirwa kunofanirawo kuendeswa nekunyora mukati menguva yemavhiki matanhatu. Mune zvimwe zviitiko zvinogona zvakare kuitwa manhamba. Dare redzimhosva rakazotumira chiziviso chekukwidza kubazi rehurumende pamwe nechikumbiro chekutumira magwaro ese ane chekuita nenyaya iyi nekuipindura muchitauro chekudzivirira. Kunzwa kuchazorongwa. Dare rinobva rangosarudza chete pamusoro pechisarudzo chakapesana pakuramba. Naizvozvo, kana mutongi akabvumirana newe, anongobvisa chete danho pakuramba kwako. Maitiro acho haasati apfuura zvakadaro. Hurumende ichafanirwa kupa danho idzva pamusoro pekupokana. Nguva dzakatarwa mumutemo wekutungamira Mushure mechisarudzo chehurumende, une mavhiki matanhatu ekuisa chinoramba kana kukwidza nyaya. Kana iwe ukasapokana munguva, mukana wako wekuita chimwe chinhu chinopesana nesarudzo ichapfuura. Kana pasina kupokana kana kukwikwidza kwakaendeswa kupokana nesarudzo, ichapihwa masimba epamutemo. Izvo zvinofungidzirwa kuve zviri pamutemo, zvese maererano nezvakagadzirwa uye zvemukati. Nguva yekumisikidzwa yekuisa chinoramba kana kukwidza saka masvondo matanhatu chaiwo. Saka iwe unofanirwa kuve nechokwadi chekuti unotora rubatsiro rwemutemo munguva. Kana iwe ukasabvumirana nesarudzo, unofanirwa kuendesa ziviso yekuramba kana kukwidza mukati memavhiki matanhatu. Law & More inogona kukuraira iwe mune ino maitiro. Nhepfenyuro Tinogona kukakavara kwauri munzvimbo dzese dzemutemo wekutonga. Funga, semuenzaniso, wekutumira chiziviso chekupokana kuMutungamiriri weMasipala achipokana nekumisikidzwa kwechirango zvichienderana nemutero wekubhadhara kana kumhan'ara pamberi pedare maererano nekutadza kupa mvumo yezvakatipoteredza yekutendeuka kwechivako. Iyo yekuraira tsika chikamu chakakosha chebasa redu. Muzviitiko zvakawanda, uine zano chairo, unogona kudzivirira kuenderera kuhurumende. Tinogona, pakati pezvimwe zvinhu, kukuyambira nekukubatsira ne: • kunyorera rubatsiro; ; • kuisa kupokana nekubviswa kwemvumo. Kuenderera mberi mumutemo wekutungamira kazhinji basa regweta rechokwadi, kunyangwe kubatsirwa negweta kumutemo kusiri kwekumanikidza. Iwe haubvumirane nedanho rehurumende iro rine mhedzisiro inosvika kwauri here? Wobva wabatana nemagweta ehutongi e Law & More zvakananga. Tinogona kukubatsira iwe!